ULovemore Ndou: Usuka eringini lesibhakela uya enkantolo | Scrolla Izindaba
ULovemore Ndou: Usuka eringini lesibhakela uya enkantolo
Ngenkathi eseNingizimu Afrika, uLovemore Ndou wayekhuluma eringini lesibhakela. Manje use-Australia futhi wenza inkulumo yakhe enkantolo.
Wazalelwa eMusina, eLimpopo kowezi-1971, lowo owayengumpetha wesibhakela emhlabeni manje usezinze e-Australia lapho enenkampani khona yabameli.
Uthe waqala isikole esemdala kakhulu eneminyaka eyisishiyagalolunye.
“Ukukhula ngaphansi kombuso wobandlululo kwakunzima futhi ukuhlupheka kwenza isimo saba sibi kakhulu,” uyasho.
“Ngangivalelwe ejele izinsuku ezingama-90 ngoba intombazane emhlophe ngebala yayingithanda. Ngalezo zinsuku abantu abamnyama babengavunyelwe ukuba namabhizinisi noma ukusebenzisa ngisho izindlu zangasese ezifanayo, amabhasi noma izindawo zokuzivocavoca ezifanayo nabamhlophe. ”
Uthe amaphoyisa amephula isandla ejele.
“Isibazi esisebusweni bami akusona esesibhakela. Kusuka ekushayweni. Amaphoyisa angihlasela angisasazela ngezinja.”
Wayebalekela ubunzima ngokugxila esibhakeleni. Ubeziqeqesha ejimini yasemayini endaweni yangakubo eLimpopo.
Wayenomsebenzi ophumelele wesibhakela se-amateur ngokunqoba amahlandla ayi-11 ezimpini zakhe zokuqala. UNdou wabe esehlala e-Australia kowezi-1995 futhi wakha umsebenzi ohloniphekile wokuba nguchwepheshe.
UNdou ubhekane nabashayisibhakela abasezingeni eliphezulu njengoPuerto Rico, uMiguel Cotto e-Las Vegas. Uhlulwe empini ngamaphuzu futhi ngokuhamba kwesikhathi wanqoba isicoco somhlaba se-IBF welterweight e-Sydney.
“Ngisebenze noFloyd Mayweather ngenkathi elungiselela ukulwa noHatton. Ngamenza wopha, kodwa kumele ngithi ungumpetha.”
Kowezi-2003, uNdou wenza iziqu zomthetho nezokuxhumana eNyuvesi yase-Western Sydney.
“Ngingumdlali ofunde kakhulu emhlabeni,”utshele i-SAFM Sports.
“Ngifunde kakhulu kunabo bonke ababengoMengameli baseNingizimu Afrika.”
Uthe ufuna ukwenza i-PhD njengoba eseqede iziqu zakhe ze-Master’s degree.
“Ngemuva kwalokho, ngifuna ukubuyela eNingizimu Afrika ukuyosiza ngokuletha ushintsho.”